कोमल ओलीको आगमनले कुन्ति र प्रतिभालाई चिन्ता – YesKathmandu.com
कोमल ओलीको आगमनले कुन्ति र प्रतिभालाई चिन्ता
मङ्गलबार १४, मङि्सर २०७३
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले गायिका कोमल ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने तयारी थालेपछि महिला नेत्रीबिच खैलाबैली मच्चिएको छ । पार्टी एकताकै दिन औपचारिकरुपमा राप्रपामा प्रवेश गरेकी गायिका ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने तयारी अध्यक्ष थापाले थालेका छन् । ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने चाल पाएपछि महिला नेत्रीहरु प्रतिभा राणा, कुन्ति शाही, सरस्वति केसी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
पार्टीमा योगदान नै नगरी एकै पटक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न थालेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । तर ओलीलाई औपचारिकरुपमा राप्रपा नेपालमा भित्राउँदा कमल थापाले केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिएका थिए । थापाको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले पनि सहमति जनाईसकेका छन् ।
पार्टी प्रवेश भन्दा पहिले भएको संवादमा ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने बचन थापाले दिएको स्रोतले बताएको छ । केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने प्रतिबद्धता पाएपछि कोमल पार्टी एकता कार्यक्रमको उद्घोषण गर्न पुगेकी थिइन । त्यही कार्यक्रममा उनले राप्रपा प्रवेश गरेकी हुन् । राजसंस्थाप्रति आस्था राख्छु, भन्दै हिड्ने कोमल औपचारिकरुपमा कुनै पार्टीमा थिइनन् । केही समय पहिले नेपाल सद्भावना पार्टीमा जाने हल्ला चलेको थियो ।
एकीकरण भन्दा पहिलेको राप्रपा नेपालमा महिलाको नेतृत्व कुन्ति शाहीले समालेकी थिइन । अध्यक्ष कमल थापाकी अति विश्वास पात्र शाही स्थानीय विकास राज्यमन्त्री समेत बनिन् । तर कोमलको आगमणले उनलाई समस्या पारेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले भर्खरै प्रवेश गरेकी ओलीलाई बढि विश्वास गर्न थालेपछि शाही असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ ।
कोमलको आगमणलाई राप्रपा नेत्री प्रतिभा राणाले पनि रुचिकर मानेकी छैनन् । नेताहरुलाई सजिलै कन्भिन्स गर्न सक्ने कोमलको क्षमताबाट उनीहरु त्रसिएको राप्रपाभित्र चर्चा चल्न थालेको छ । शाही र राणा लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । दुई राप्रपा हुँदा दुवैले महिला संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका थिए ।
महिला संगठनको प्रमुखलाई लिएर दुई नेत्रीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु हुन लागेकै बेला कोमलको आगमन भएको छ । दुई नेत्रीलाई पाखा लगाएर महिला विभागको प्रमुख दावी गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
७२ जना ब्राजिली फुटबल टोली चढेको विमान दुर्घटना
One thought on “कोमल ओलीको आगमनले कुन्ति र प्रतिभालाई चिन्ता”
You’ve got to be kidding me-it’s so trasapnrently clear now!
देशभर अझै तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर – शिक्षा मन्त्री
अहिलेसम्म कांग्रेस महाधिवेशनका लागि २२ सय प्रतिनिधीको छानिए
रामचन्द्र पौडेल प्यानलबाट उम्मेद्धारी दर्ता, महामन्त्रीमा सशांक, कोषाध्यक्षमा सीतादेवी
राजनीतिको कालो बादल हटेपछि सभामुख ओनसरी घर्ती फुरुङ्ग,नेताहरुलाई दिइन धन्यवाद
बनाउँने होइन त ! १३ हजारमा सुन्दर घर
आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको ओइरो
भूकम्पयता १० दिनमा ३६ सय उडान
श्रीहर्ष कोइरालाको दुखेसो ‘विपीको छोरा भनेर मात्र के गरौं ?’
संसदमा लोकमान महाभियोग प्रस्ताव पेश , ९ गते छलफल हुँदै
भोट २२९, चुनाव खर्च २५ लाख !